Madaxweyne Farmaajo oo war cusub kasoo saaray dayn cafinta Somalia
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bogaadiyey guusha shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ka gaareen barnaamijka dayn cafinta ayaa soo dhaweeyey heerka sare ee uu gaaray xiriirika iskaashi ee DFS iyo Hay’adaha Maaliyadeed ee Adduunka.
Sidoo kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku ammaanay Golaha Xukuumadda ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Wasiirkiisa Maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyleh, Guddoonka iyo Xildhibaannada Labada Aqal, Madaxda Dowlad Goboleedyada, ganacsatada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu midoobeen, uguna dhabar adeygeen ka miro dhalinta hiigsiga deyn cafinta iyo qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha dalka.
Waxaasu waa is tus-tus iyo sharaxaada doorashada dambe.Haddii uu rabo Ina Farmaajo in Insha Allaah markale sax loo doorto xamar iyo nawaaxigeeda ha ka sifeeyo AL-Shabaab.Ina farmaajo intaas waxuu ku hayaa waxbaan qabtay.Maxuu qabtay haddiiba aysan xamar faro ugu jirin oo xamar inteeda badan ay shabaab maamulaan.Waa yaabe maxuu Ina farmaajo dagaalo ugu qaadaa gobalada ka fog xamar ayadoo uusan xamar wada hayn?War markaad xamar wada xoraysid isu keen-keen Insha Allaah waan ku dooran doonaa markalee.Use malayn mahayo in uu yahay mid xamar wax ka qaban kara.
Atoore daynta soomaaliyaa laga cafiyey. Ma waxaad be leedahay farmaajaa daynta lagu lahaa. Waxaad u egtahay qolooyinka qaadka laga joojiyey oo kala garan la. waxa wanaagsan iyo waa xun. Farmaajo haddaad ciil u qabtid kala reebta diyaar nooh..is daji duqa…